Ny mpizara preprint afrikanina dia mamorona habaka fampahalalana ho an'ny fikarohana coronavirus - AfricaArXiv
Ny mpizara preprint afrikanina dia mamorona habaka fampahalalana ho an'ny fikarohana coronavirus
navoakan'ny Jo Havemann on March 19 March 2020 March 19 March 2020
Navoaka voalohany tao researchprofessionalnews.com/rr-news-africa.../
Ny fandraisana anjara avy amin'ny Grassroots dia nitady hisarika fiaraha-miasa ary hizara hevitra
Ny serivisy fanomanana maimaim-poana AfricaArXiv dia namorona an fampahalalam-baovao izay ny mpahay siansa sy ny hafa dia afaka manampy fampahalalana momba ny nobelin'ny coronavirus hanampiana amin'ny fandrindrana ny valin'ny kaontinanta.
Ny AfricaArXiv dia namorona tahirin-kevitra Google sy tahiry Github izay misy afaka manangona loharanom-pahalalana mifandraika amin'ny teny afrikanina amin'ny otrik'aretina SARS-Cov-2 sy ny aretina mifandraika amin'izany.
Izany dia mety hampiditra ny fampahalalana toy ny infografika momba an'i Afrika na amin'ny ankapobeny, na torolàlana momba ny hetsika ataon'ny vondron'olona, ​​amin'ny fiteny sy endrika isan-karazany. Ny loharanom-pahalalana dia afaka mamantatra ireo fitaovana misy ny labzera azo ampiasaina, toy ny milina PCR, izay azo ampidirina amin'ny ezaka valin'ny Covid-19.
Mampirisika ny mpikaroka ny AfricaArXiv mba handefa fikarohana sy antokon-kevitra Covid-19 mifandraika amin'izany ho antontan-taratasim-tsoratra mba hahafahana mametraka ao amin'ny tranokalan'ny serivisy. Ny krizy coronavirus mitohy ankehitriny dia mampiseho tsara ny filana ny siansa misokatra, hoy Jo Hasmann avy ao amin'ny AfricaArXiv.
Ny fihetsika dia tsy hita ho fananan'ny AfricaArXiv, hoy izy. "Mikasa ny hiara-hiasa isika ary mazoto manatona ireo olona mpiray tsikombakomba, orinasam-panatanjahantena sy fandraisana andraikitra hafa, dia ny ahi-tena sy ny andrimpanjakana, mba hanompoana ny fiaraha-monina Afrikanina miaraka amin'ny fahaizan'ny mpiara-miasa rehetra hanalefahana ny vokatr'ilay valanaretina."
Joy Owango, talen'ny mpanatanteraka ny serasera momba ny serasera momba ny serasera TCC Afrika sy mpiara-miasa amin'ny tetikasa AfricaArXiv, dia nilaza fa "ratsy izany" fa nitondra loza izy nahita ny maha-zava-dehibe ny siansa misokatra.
Ny siansa misokatra dia tsy mbola nasandratra amina faritra sasany amin'ny kaontinanta, hoy izy. "Ny mpahay siansa sasany dia misafidy ny tsy hamoaka amin'ny sehatra fidirana misokatra satria ny sasany amin'ireo diary misy antony lehibe dia mbola ampiasaina ho fototry ny fampiroboroboana."
“Na izany aza, ny sehatra iray toa ny AfricaArXiv dia ilaina amin'ny fahitana ny fikarohana afrikana. Tsy tokony hiandry loza isika hahita ny maha zava-dehibe ny siansa misokatra, fa ataovy izany ny fitsipika, "hoy izy nanampy.
Sokajy:	Open AccessPublishing
Ireto ny: Havemann, Jo, Bezuidenhout, Louise, Achampong, Joyce, Akligoh, Harry, Ayodele, Obasegun, Hussein, Shaukatali,… Wenzelmann, Victoria. (2020). Fanamorana ny fotodrafitrasa misokatra Open Science ho an'ny valiny afrikana mahomby amin'ny COVID-19 [preprint]. doi.org/10.5281/zenodo.3733768 Ekipa Mpanoratra: Hamaky bebe kokoa…
Ny fanafoanana ny fampahalalana momba ny fomba fanao tsara sy soso-kevitra momba ny fitondran-tena mba hampihenana ny fihanaky ny coronavirus dia omena amin'ny teny anglisy. Fiteny eo an-toerana eo amin'ny 2000 eo no ampiasaina eto Afrika ary manan-jo ny olona Hamaky bebe kokoa…
Lorem quis elit. consectetur Praesent dapibus Aenean ipsum